श्रीमान विदेशमा भएपछि म के गरुँ ? – Sidha Post 24
श्रीमान विदेशमा भएपछि म के गरुँ ?
मेरो यो कथा ५ बर्ष पहिलेको हो त्यस बेला मेरो उमेर भर्खर १४/१५ हुन लागेको थ्यो होला । हुन त आज मेरो २० बर्षको उमेर मा पनि म त्यतिनै सुन्दर अ-नी का-मु-क छु, मे-रो वि-वा-ह पनि भएको १ बर्ष भो र पनि म धे-रै नै से-‘क्सी’ छु ।
मलाई से-क्स-को चा-ह-ना धे-रै नै छ । कुरा मैले पहिला नै भनी सके जब म १३/१४ को थिए तब मलाई अ-ति-नै से-क्स-को चा-ह-ना बदेको थ्यो । १४ बर्षाको उमेर मा नै मे-रो श-री-र ह-ल-क्क ब-डे-को थ्यो भने स्त-न पनि ठु-लो र सा-र्हो भएको थ्यो ।
मेरो श-री-र नै किनहो किन एक्दम ता-तो हु-न थालेको थ्यो । मोबायल फोन मा भ-ए-का नि-लाे फि-ल्म हे-र्दा र बिभिन्न उपन्यास पढ्दा त मेरो श-री-र ता-ते-र काम्दथ्यो ।
त्यो बेला मलाई अ-ती नै यो-न सं-प-र्क ग-र्न म-न लाग्थ्यो। राती सुत्ने बेलामा म सधैं नेपाली उप्न्यास पढ्ने गर्थे । म सधैं उपन्यास पढ्दा तथा मोबाईल मा फिल्म हेर्दा सधैं ना-ङै ब-ने-र आ फ्नो यो-‘नी’ त-था ‘स्त’-न मा हा-त मु-सा-र्ने गर्थे ।
किन हो किन मलाई के-टा मा-न्छे दे-ख्नै नहुने भएको थ्यो। केटा मान्छे देखो भने सिधै ग-ए-र यो-न सं-प-र्क गरु जस्तो ला-ग्थो। केटा मान्छेको यो-ना-ङ मे-रो गु-प्ता-ङ मा प-से-को अ-नु-भ-ब गर्न थालदथे । श्रीमान विदेशमा भएपछि म के गरुँ ?
के तपाई म संग भिडियो कलमा बोल्न चाहानु हुन्छ ? मेरो इमो लिंकमा जोइन हुनु होस् इमो लिंकको लागि फोटोमा क्लिक गर्नु होला !